Iimpawu zeYeti Crab | Ngeentlanzi
UIldefonso Gomez | | Amanzi olwandle, abanye
Namhlanje masinike ukujija kwiintlobo ze lwanyana esihlala sithetha ngayo, kwaye makhe sihlomle namhlanje ngohlobo oluthile unonkala ithathwa njengentle kakhulu. Izizathu azisilela, kuba nje ukuba uyibone uyakuqonda ukuba yenye yezona ntlobo zinomdla kwaye ezintle esiza kuzifumana.
Unonkala Yeti wothusa wonke umntu omaziyo. Ngaphezu kwako konke, ngenxa yokubonakala kwayo. Masiqale ngokuthetha ngezinye zezona zinto zisisiseko. Kwaye i-crab yase-Yeti ihlala kumazantsi e-Pacific Ocean, kumgama omalunga ne-2.300 yeemitha ubunzulu.
Eyona nto yenza ukuba ibetheleleke ngakumbi yile yayo imbonakalo, Njengoko besesitshilo. Kwaye kukuba olu hlobo lugqunywe ngelaphu elifana neentsiba ezimhlophe zesilika. Ukongeza, ubukhulu bayo buhlala buba malunga neesentimitha ezili-15 ubude, ke sinokuthi ngunonkala onobungakanani obunomdla ngakumbi okanye obuncinci.
Iimpawu ze Ukiwa hirsuta banomdla kakhulu. Ihlala ezinzulwini zePasifiki, apho kukho ulwelo olunokuba yingozi kwezinye iintlobo. Into ekufuneka siyazi kukuba iinzipho zononkala zine-bacterial filamentous ethintela ukuba inganxila, yiyo loo nto ibanike izinto ezahlukeneyo.
Ukuba sithathele ingqalelo eyakho ukondla, sinokuthi luhlobo oludlayo. Kwelinye icala, uphando lwakutsha nje luqinisekisile ukuba indawo ahlala kuyo ayinakho ukukhanya, okuqinisekisa enye yeempawu zayo ezinomdla: ayimfama.
Sazi okuninzi malunga nononkala waseYeti. Kodwa kuyinyani ukuba kusekho abaninzi ngaphandle kokwazi ngokuchanekileyo. Ngale ndlela, kuyakufuneka ukuba phanda ngakumbi ukuze ucacise zonke iimfihlelo ezimngqongileyo. Ewe kunjalo, sisacinga ukuba luhlobo olunomdla kakhulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Isigcawu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Sijonga unonkala waseYeti